Factory Sheet Aluminium, mpamatsy - Mpanamboatra Sheet Aluminium China
Takelaka sy takelaka aluminium 6061
Takelaka vita amin'ny alim-pandrefesana diamondra vita amin'ny boaty
ravina firaka alimo
Test T Hot asongadin'ny fahatongavana vaovao vokatra tsara indrindra
TRANO ALUMINY 7050
7050 ny aliminioma dia firaka voatsabo hafanana mahery, izay manana fanoherana harafesina avo kokoa noho ny aluminium 7075. ary henjana kokoa. Manana fahatsapana ambany kokoa amin'ny famonoana olona
TALATA ALUMINY 7075
Ny takelaka aliminioma 7075 dia an'ny al-Zn-Mg-Cu alimina mahery, izay tanjaka lehibe, hatsiaka mafy miasa mangatsiaka miasa tsara, tsara lavitra noho ny vy malefaka.
SORATRA ALUMINIA 6061
Ny takelaka aluminium 6061 dia vokatra vita amin'ny alikaola avo lenta novokarin'ny fitsaboana hafanana sy ny fanaovana sary mialoha ho an'ny Mg sy Si, miaraka amin'ny fahaizan'ny milina tsara, ny fananana azo amboarina sy ny plating, ny fanoherana ny harafesina ary ny hamafiny avo.
Ny takelaka aliminioma 6063 dia firaka plastika avo lenta Al-Mg-Si, miaraka amin'ny fananana fanodinana tena tsara, welding tsara, fantsom-baravarana sy plating, fanoherana ny harafesina tsara, hamafisana, mora volo, fonosana, misy vokany tsara ny oksidasiôma anodika, dia firaka fantsom-panafody mahazatra.
SARY ALUMINY 6082
Ny takelaka alimina 6082 dia lovia aliminioma firaka tena tsara eo amin'ireo takelaka aliminioma 6 (Al-Mg-Si), miaraka amina endrika sy mora fanodinana, fampisehoana fanehoan-kevitra anodika tsara, firakotra mora, fanoherana harafesina tsara ary fanoherana ny oksidasiôna.
Ny takelaka alimina 5A05 dia firaka alimika tsy misy rust an'ny andiana aliminioma-magnesium, ny tena mampiavaka azy dia ny hakitroka ambany, ny tanjaka avo lenta ary ny fanitarana avo. Ho an'io faritra io ihany, ny lanjan'ny firaka aliminioma-magnesium dia ambany noho ny andiany hafa.
Mpamatsy vy vita amin'ny alim-bary vita amin'ny alim-bary, vidin'ny takelaka vita amin'ny takelaka aluminium, Takelaka aluminium mora vidy, firaka aluminium 6061 vidiny, Takelaka aluminium vita amin'ny takelaka, Ravina aluminium 7050,